BGR - - Tele RELAY တစ်ခု6သြဂုတ်လ 28 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "6 သြဂုတ်လ 28 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
BGR -6သြဂုတ်လ 28 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
Tele RELAY တစ်ခု 29 သြဂုတ်လ 2019
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်, ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတဲ့ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ရောင်းနေကြသည်နိုင်အမြင့်ဆုံးပေးချေခြောက်ယောက်က iPhone နှင့် iPad များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာရင်းကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့ 300 န်းကျင်ကသူတို့ကိုတွေ့ရှိရန်လျှော့ applications များကိုရှာဖွေ, ဒါကြောင့်မျှော်လင့်သူတို့ပြုလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်သည်အခြားစုံတွဲတစ်တွဲကိုတွေ့လိမ့်မည် အဆိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းထဲမှာအခမဲ့မနေ့က သင်မူကားမြန်မြန်သာလျှင်။
ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါက iPhone နှင့် iPad များအတွက်ပေးဆောင် apps များဖုံးလွှမ်း။ ၎င်းတို့၏ developer များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ BGR မဆိုလျှောက်လွှာပြုစုသူနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုရှည်လျားပြောပြရန်လမ်းမရှိ။ ထိုသို့သောရောင်းအားတစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏အချိန်မှာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦး link ကို click နှိပ်ပြီးအစားကမရှိတော့အခမဲ့ "ရ" ၏နောက်လာမည့် app တစ်ခုမှဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းကိုကြည့်ပါလျှင်။ အဆိုပါရောင်းချမှုပြီးစီးခဲ့သည်။ သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါက, Apple ကသငျသညျကိုအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ တချို့က applications များထပ်တိုး In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RSS feed မှ Subscribe သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန် e-mail ကိုတပ်လှန့်ကို ဤအပို့စ်များကိုဖန်ဆင်းသောအခါအသိပေးကျနော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းပျောက်ဆုံးရောင်းအားကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ဘလူးတုသ် Find: tracker devices များ
လျှောက်လွှာပစ်လွှတ်ရောင်းချခြင်း။ $ 4,99 100% လျှော့စျေးသာ, ယခုယနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
BLEFinder သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကြံ့ခိုင်ရေး headband, tracker, ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ပတ်နာရီအဖြစ်သင့်ရဲ့ပျောက် Bluetooth ကိရိယာများ, ရှာတွေ့ဘို့အငြိမ်ဆုံးပဲ App ဖြစ်ပါတယ်
1 ။ သငျသညျနီးစပ်သူဖြစ်ကြောင်း Bluetooth ကိရိယာများများ၏စာရင်းအားပြသရန်အတွက်အဓိကစာမျက်နှာကိုဖွင့်။
2 ။ သငျသညျ signal ကိုအစွမ်းသတ္တိအားဖြင့်သို့မဟုတ်နာမတော်ဖြင့်ထုတ်ကုန်များ၏စာရင်း sort နိုင်ပါတယ်
3 ။ သင်လုပ်ချင်တဲ့ကိရိယာ၏ [အပြာရောင်စာသားထဲမှာပြသ] နာမကိုရှာပါ။
4 ။ ရှာဖွေမှု mode ကိုဖွင့်လှစ်ရန်သင့် device ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
5 ။ အဆိုပါဒိုင်ခွက်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ရွှေ့နှင့်သင့် device ကိုတွေ့ရှိရန်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ!
ဘလူးတုသ်ကိုရှာပါ Download: ခြေရာခံစက်ကို
Vxcam - AR ဗီဒီယို & စာသားအီမိုဂျီ
ပုံမှန်စျေးနှုန်း: $ 1,99
• hologram နှင့်ပုံသေဗီဒီယိုများနှင့်အတူဗီဒီယိုများဖန်တီးဖို့ပြောင်းလဲနေသောပုံစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အတူ app store ကိုအပေါ်သာလျှင်လျှောက်လွှာ။
• # 1 AR App ကိုက AR ဆန်းသစ်နှင့်အေးမြဗီဒီယိုများဖန်တီးရန်လွယ်ကူအခါ
AR သင်တို့ပတ်လည်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စာသား, ရုပ်ပြောင်, ဗွီဒီယိုထည့်ပါ။ ကိုလက်စသတ်သောအခါ, သင်တစ်ဦးပုံပြင်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ပြောပြစဉ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယူနိုင်ပါတယ်။
အံ့ဖွယ် features တွေရှာဖွေတွေ့ရှိ:
- Snapchat, Facebook, Whatsapp နှင့်ပုဂ္ဂလိကကျမ်းပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုနှင့်သင်၏ပုံပြင်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေပါ။
- စာလုံးတွေနဲ့အရောင်တွေအမျိုးမျိုးအတွက်စာသားမ AR Add
- သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုများ Add
- 3D နှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့သင့်ဗီဒီယိုများအတွက် Walk
- ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗီဒီယိုကို hologram ဖန်တီးနိုင်ခြင်း။
- နှုတ် image ကိုစောင့်ကြည့်နှင့်အတူစစ်မှန်သောတ္ထုအပေါ်အခြေခံပြီး, Movies ။
- သူတို့ကသင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖြစ်လျှင်အဖြစ်အရာဝတ္ထု Browse နှင့် virtual reality တွေ့ကြုံခံစား
- သင်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာတ္ထုမှဗီဒီယိုများ paste နဲ့အံ့သြဖွယ် hologram ဖန်တီးနိုင်အောင်အဆိုပါ application ကိုယခုတ္ထုကိုသိရှိနိုင်ဖို့စက်သင်ယူမှုအသုံးပြုသည်။
- iPhone ကို X ကိုအဘို့အ Optimized
hologram ဖန်တီးရန်အရာဝတ္ထု / ဟင်းလျာများနှင့်အခြေခံမျက်နှာပြင်အဖြစ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရုပ်ပုံအရည်အသွေးမြင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်ရဲ့ image ကို / object ကိုကွဲပြားခြားနားသောအလင်းရောင်အခြေအနေများအတွက်ပုံပေါ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါ။ ပုံတစ်ပုံရတဲ့အရာတွေစာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ် device ကို screen ပေါ်မှာပြသလျှင်, ထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထင်ဟပ်ထောက်လှမ်းဆီးတားစေနိုင်သည်။
သငျသညျ holographic ဗီဒီယိုနှင့်ကပ်ညှပ်ဖန်တီးရန်သင့်စာကြည့်တိုက်ကနေမဆိုဗွီဒီယိုကို add နိုင်ပါတယ်။
AR ဗီဒီယိုစာသားနဲ့အီမိုဂျီ - Vxcam Download
Monster ပန်းခြံ - AR ကမ္ဘာ့ဖလား Dino
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူသို့မဟုတ်ဒိုင်နိုဆောနဲ့ Hilary ဗီဒီယိုကိုဖြစ်စေလျက်, ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နိုင်ကြသောသူတို့ကိုအလိုပါသလား? သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်၌သို့မဟုတ်မွို့၌, သင်တို့၏ဧည့်ခန်းထဲမှာကြီးမားသောမိကျောင်းနှင့်အတူကစားပြီးပြီ?
◆ Monster ပန်းခြံ - AR ◆ Dino ကမ္ဘာ့ဖလားသင်ကိရိယာမယုံနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ကျဒိုင်နိုဆောနှင့်သင့်ကင်မရာကတခြားစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောသတ္တဝါများကိုစောင့်ရှောက်မည်နှင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုကြောင်းအသစ်တခုလုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝအရွယ်အစားမိကျောင်း View, သူတို့ကိုအတူတူလမ်းလျှောက်, သင့်ဤလောကသို့ကြွလာကုန်အံ့, သင်၏မိတ်ဆွေများအထင်ကြီးဖို့အေးမြဓါတ်ပုံများနှင့်စံချိန်ဗီဒီယိုများယူပါ။
ချစ်စရာကောင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်သို့သငျသညျထိုး။ အလင်း၏တိကျခြေရာခံခြင်းနှင့်ထောက်လှမ်းနှင့်အတူ Arkit ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်နှင့်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုစေသည်။
"ဒီ Arkit နည်းပညာနှင့်အတူယနေ့ရရှိနိုင်ပါသည်အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုအမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံများတစ်ခုဖြစ်တယ်။ " - macworld.com
"ဒီဂိမ်းသူ့ဟာသူလုံးဝထိုက်တန်ပါတယ်။ ကျော်ကြားမှုနှင့်သုံးဖက်မြင်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောစောင့်ကြည့်တူသောမကြာခဏကိုးကားအခန်းထဲမှာရွှေ့ဟာအလွန်ဆွဲဆောင်မှုအတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စာသားကစားသမားသည်ဤကြီးမားသောတိရစ္ဆာန်ကိုချွတ်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပျက်ကိုစောင့်ကြည့်သည့် Jurassic ပန်းခြံအတွင်းရှိခံစားရပေးသည်။ "- nimblechapps.com
သငျသညျ Jurassic Park ကိုဖြစ်ကြသည်အဖြစ် "တကယ့်အရပျ၌လှည့်လည်နေတဲ့ဒိုင်နိုဆောကိုကြည့်ဖို့အေးမြတစ်ခုခု, ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းဒိုင်နိုဆောချစ်သောသူ, သင်မူကားပြီးသားသင့်ရဲ့ဧည့်ခန်းထဲမှာတဦးတည်းရှိသည်? ဒီအရညျအသှေး Arkit ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ "- wareable.com
"Monster ပန်းခြံ - Dino ကမ္ဘာ့ဖလား, ဒီလုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်နှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားကားအဘယ်သို့: (ဒိုင်နိုဆောလိုမျိုး) အရူးအမှုအရာမျက်စိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဒိုင်နိုဆောသန်း 65 နှစ်ကျော်အဘို့အမျိုးသုဉ်းကွသျောလညျးဤလျှောက်လွှာကိုသငျသညျအနားမှာဘက်လမ်းလျှောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှင့်အတူဓာတ်ပုံများယူဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ Monster ပန်းခြံ - Dino ကမ္ဘာ့ဖလားမှာလည်းကလေးငယ်များဒိုင်နိုဆောသင်ပေးဖို့အလွန်ကြီးစွာသော tool ကိုပါ! "- appfixpro.com
Monster ပန်းခြံနှင့်အတူ, ကြီးမားဒိုင်နိုဆောနှင့်အခြားကြောက်မက်ဘွယ်သောမိကျောင်းအစစ်အမှန်လောကမှာရှိတဲ့ကျလိမ့်မည်။ သမိုင်းမသတ္တဝါများနှင့်အတူအပြန်အလှန်, စစ်မှန်သောဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့သူတို့ကိုအဖြစ်ကြီးတွေကိုတွေ့မြင်တိုက်ရိုက်နှင့်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင့်ရဲ့နဂါးယဉ်, သငျသညျကိုလိုက်နာကြဘူး, တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အသင်ကြိုက်နှစ်သက်ဦးတည်ချက်သို့မဟုတ်ပြိုလဲရွှေ့။ တစ်ပေါ်တယ်ဖွင့်နှင့်၎င်း၏ခမ်းနားရေတံခွန်နှင့်၎င်း၏အထင်ကြီးသဘောသဘာဝနှင့်အတူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ Monster ပန်းခြံ Play! အများအပြားကအသုံးပြုသူများကိုတိုးပွားအဖြစ်မှန်လောကီသားတို့သည်အသီးအသီးကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ application နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော device များအတွက် multi-user က AR အတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။ ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံအစုတခုခံစားကြည့်ပါ - ဒိုင်နိုဆောသတ်မှတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ထားခြင်း, ပေါ်တယ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကွဲပြားခြားနားသော device များ အသုံးပြု. မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဒိုင်နိုဆောပန်းခြံတွေ့ရှ။
၎င်း၏အသားအရေကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်နိုဆောဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ သင့်ရဲ့နဂါးနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအသားအရေပုံစံကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ဥစ္စာကိုပဲရေးတတ်တယ်။ သင့်ရဲ့ Dino ၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲရန်, တပ်မက်လိုချင်သောအ texture နေရာချထား "Scan ကို" ပေါ်တွင်နှင့်စာနယ်ဇင်းထုတ်ကုန်ရဲ့ကင်မရာကိုထောက်ပြတာပါ။ ထူးခြားတဲ့မိကျောင်းတစ်ဦးစုဆောင်းမှု Create!
မိကျောင်းနှင့်အတူပျော်စရာဗီဒီယိုများ Make သို့မဟုတ်လှပသောဓာတ်ပုံများဖန်တီးရုပ်ရှင်ပေါ်သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသူတို့ကိုမျှဝေပါ။
မည်သည့်အရွယ်အစားများအတွက်ပြားမျက်နှာပြင်နှင့်စကေးပေါ်တွင်နဂါးချထားပါ။ ရိုးရှင်းစွာအသင်၏အနဂါးအတိအကျကိုအစက်အပြောက်ကိုညွှန်ကြားဖို့ screen ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုမထိ။ အကြိမ်ကြိမ်နဂါးထိမှန်နှင့်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုတွေ့မြင်!
အစစ်အမှန်လောကရှိ◆ Incredible လက်တွေ့ကျကျသတ္တဝါများ (စသည်တို့ကို Tyrannosaurus Rex, Raptor, Pteranodons, Triceratops, Allosaurus, Brachiosaurus, Scolopendra,) ။ *
◆နဂါး၏လှုပ်ရှားမှုများကို Check - သင်ကြိုက်နှစ်သက်လမျးညှနျခကိုယူကြပါ။ သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကစားရန်◆ multiplayer mode ကို။ **
◆က၎င်း၏အသားအရေကိုပြောင်းလဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Dino ဒီဇိုင်းရန်။
Monster ပန်းခြံ Download - AR Dino ကမ္ဘာ့ဖလား
သင်သည်သင်၏ဇနီးသို့မဟုတ်သင့်သူဌေးဆီကတစ်ခုခုဖုံးကွယ်ထားလိုသလား? သင်သည်တာရှည်စကားပြောရန်ချင်ကြသည်မဟုတ်လော သင်တစ်ဦးမသက်မသာအခြေအနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့? ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးနောက်ပြောင်မှုများခေါ်ဆိုခလျှောက်လွှာများကိုပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစကားပြောဆိုမှုရဲ့ start ရှေ့တော်၌ထိုနောက်ခံဆူညံသံကိုပြောင်းနှင့်သင့်အစစ်အမှန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုပြီးမှားယွင်းသောစှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုစတင်ပါ။
သင်ရမယ်ဆိုရင်နောက်ပြောင်မှုများ CALLER သင်ကူညီပေးမည်:
- စသည်တို့ကို, တစ်စုံတစ်ဦးမှတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောအလှည့် Play
နောက်ခံပုံပြောင်းဖို့ app ကို Download လုပ်ပါ - အသံနဲ့နောက်ခံဆူညံသံနှင့်အတူ AlibiCall နှင့်ဟာသတစ်ခုသို့မဟုတ်ရယ်စရာခေါ်ဆိုခဖန်တီးပါ။
ခေါ်ဆိုမှုကာလအတွင်းလိုအပ်သောနောက်ခံဆူညံသံဖန်တီး AlibiCall အဘယ်သူမျှမသင်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုသံသယပါလိမ့်မယ်။ မိစ္ဆာအထွက်စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ပြောင်မှုများခေါ်ရန်တက်ကြွစွာလျှောက်လွှာ preselected သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံတို့ကစကားဝိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကစားနေသည်ကိုခေါ်ပါ။
1 ။ လျှောက်လွှာ Install လုပ်ပါ။
2 ။ ပတ်ဝန်းကျင်သံကိုရွေးချယ်ပါ။
3 ။ ယခုသင်သွားချင်ဘယ်မှာထံမှအတုခေါ်ဆိုမှုကိုသုံးပါ။
သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှု၏တည်နေရာမှာဖြစ်စုစုပေါင်းအသံက effect ကိုရ - ရေကူးကန်, လေဆိပ်သို့မဟုတ်တောင်ထိပ် - ။ တစ်ဦးအမည်ခံအခကြေးငွေ, သင်တို့၏စကားကိုအတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏မိတ်ဆွေများအပေါ်တစ်ဦးလှည့်ကွက်ကစားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ။ ဒါဟာစကားလက်ဆုံရှေ့တော်၌နောက်ခံအသံကတင်ထားရန်လွယ်ကူသည်။
1 ။ install လုပ်ရန်မလွယ်ကူ။
2 ။ user-ဖော်ရွေ interface ကို
3 ။ နီးပါးသုညကုန်ကျစရိတ်။
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း: $ 2,99
NES တိုက်ပွဲစီးတီးဟာအလွန်အစဉ်အလာများနှင့်ဂန္တိုက်ပွဲများဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စူပါ Tank Battle ဆွဲဆောင်မှုအသစ်သောဒြပ်စင်များနှင့်အတူတစ်တိုက်ပွဲများမြို့ NES / FC အသင်းခေတ်သစ်စတိုင်လ်ဖြစ်ပါတယ်။
(အလွယ်ကူဆုံးထံမှအများဆုံးအရူးမှ) ကွဲပြားခြားနားသောအခက်အခဲအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်5။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည်။
- 500 ကတ်များ (စူပါ Cool!) ကစားနိုင်ပါတယ်
- အကြံပေးအဖွဲ့သင်ကူညီမယ့် 2e ကစားသမားကဲ့သို့ဖြစ်၏
- 20 ရန်သူတင့်ကားကဒ်
မင်္ဂလာပါ surfer ... သင်အနက်ရောင်လှိုင်းအနိုင်ယူနိုင်သလား?
5 အခန်းကြီး 50 အဆင့်ဆင့်စီကျအခနျးသစ်ကိုရန်သူတစ်ဦးစီးရီးတင်ဆက်
•အဆုံးမဲ့ Mode ကို: တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်အခြားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်
•အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာကိုမျှ In-app ကိုဝယ်ယူ
•သင့်ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့ Apple ကတီဗီမှာ Play
• iCloud အသုံးပြု. သင်၏အတိုးတက်မှုထပ်တူကျအောင်
•အပြည့်အဝအင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျပန်, တရုတ်, ဂျာမန်, အီတလီ, ကိုးရီးယား, ပေါ်တူဂီနှင့်ရုရှားအတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီ
အမှောင် Wave ကို Download လုပ်ပါ
ဤသည်ကြီးမားသော fryer လေကြောင်း6ပိုင့လျော့နည်းထက်ဝက်ကျော်မော်ဒယ်များများအတွက်ရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည် - ပေးဖို့ BBG
PS3 သို့မဟုတ်, Xbox များအတွက်ကြိုတင်မှာယူပါ Borderlands4နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10 အမေဇုံ၏အကြွေးပေါင်းအပိုဆုရ - BGR